PinePhone inopedza nhanho yayo neCommunity Editions | Linux Vakapindwa muropa
PinePhone inopedza nhanho yayo neCommunity Editions, asi ichi chinongova kutanga
Kunyangwe zvingaite senge iwe paunoona iwo musoro wemusoro uyo Lucasz Erecinski akagovana, iyi haisi nhau yakaipa. Uye ndiyo PINE64 Yakazivisa , que PinePhone CE haichazosunungurwa, ndiko kuti, iyo Community Edition kana yemunharaunda editions, pakati payo takawana idzo dzakashandisa iyo UBports (Ubuntu Kubata), PostmarketOS, Manjaro, Mobian uye KDE (Plasma Mobile) masystem. Pfungwa yekutanga yatinogona kuwana kana tichiverenga zviri pamusoro ndeyekuti vakasiya, asi havana.
Nhasi Kukadzi 2, 2021, PINE64 inozivisa kuti havachazotengesa mafoni erudzi urwu (CE). Chinangwa chaive chekuti vazhinji vedu tinogona kuwana uye kuyedza Zvese izvo foni yeLinux inogona kupa kunze kwebhokisi, uye zvinoita sekunge gore rave kupfuura nguva yakaringana yekuzviita. Kuti uite izvi, kambani yakatengesa enharaunda edhisheni neakasiyana masisitimu anoshanda akaisirwa default, ayo aiperekedzwawo neshanduko dhizaini senge marogo epurojekiti yega yega.
PINE64 inogadzirira nhanho dzinotevera nePinePhone
Tichifunga kuti icho chinhu chandaigara ndichitaura, kuti zvese zvinotaridzika zvakanaka kwazvo kana zvikasasiya budiriro, uye semubati we PineTab kwandinoita mimwe miedzo, Ndaifanirwa kuverenga chinyorwa chakaburitswa naPINE64 mushe kuti ndisarasikirwe nechero ruzivo. Uye zvakadaro, ndine kusahadzika kwangu nezve izvo zvichaitika mune ramangwana, muchidimbu nekuti zvinopa zvishoma zvishoma. Ivo vanotaura izvo PinePhone ichave chikuva icho Hardware ichavewo chikamu, sekhibhodi.
Mune ramangwana ivo vachapa rumwe ruzivo, senge iyo sisitimu yekushandisa iyo yavanoshandisa nekutadza iyo inotevera PinePhone. Dai ndaifanira kubheja, ndakapihwa zvandakaona, ndinofunga handidi kubheja nekuti vakasarudza Ubuntu Kubata nekuda kwekukanganisa kwayo, uye ini handisi mutsigiri mukuru weArch Linux kana Mobian, zvirinani muzvinyorwa zvavo naPhosh. Ehe, ini ndinogona kutaura zvandingade, uye ndezvekuti ivo vasarudze Manjaro neLomiri kana Plasma Mobile. Tichazoziva zvimwe mumavhiki mana, asi PinePhone iri pano kuzogara.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » PinePhone inopedza nhanho yayo neCommunity Editions, asi ichi chinongova kutanga
kuvhuraSUSE Leap 15.1 inosvika kumagumo ehupenyu hwayo
Ubuntu 21.04 (Hirsute Hippo): Wayland nekutadza?